Nin ay xaaskiisa ka careysiisay oo lugeeyay 450km iyo ganaax la duldhigay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Nin ay xaaskiisa ka careysiisay oo lugeeyay 450km iyo ganaax la duldhigay
Nin ay xaaskiisa ka careysiisay oo lugeeyay 450km iyo ganaax la duldhigay
Ninkan oo barraha bulshada looga yaqaano Forrest Gump ayaa nasiino ka doonay inuu lugeeyo, ka dib markii ay wada murmayn xaaskiisa.
Booliska Talyaaniga ayaa ninkan ku joojiyay deegaanka Fano ee Xeebaha Adriatic, ka dib hal toddobaad oo wadada uu ku soo jiray, isagoona markaasi ka tagay Magaalada Como ee Waqooyiga Talyaaniga. Mudadaasi uu lugeynayay waxa uu jaray masaafo dhan 450km.
Booliska ayaa sababta ay u joojiyeen waxaa lagu sheegay in uu jebiyay awaamiirta laga soo saaray Coronavirus, ee dhaqdhaqaaqa xilliyada dambe ee habeenkii ah, waxayna ku ganaaxeen afar boqol, shan iyo sideetan dollar ($485).
Ninkan ayaa 1994-kii filim uu waday jilaaga Tom Hanks ku jilay, isagoo cararaya kumanaan kiilo mitir, gudaha dalka Mareykanka.
Sheekadan waxaa bilowgeedii hore qoray Wargeyska Il Resto del Carlino ee ka soo baxa Magaalada Bologno, si dhakhsi ah ayayna ugu faaftay Warbaahinta Talyaaniga.
Ninkan ayaa booliska u sheegay “Waxaan halkan ku imid lug, wax gaadiid ah maanan isticmaalin. Intii aan wadada ku soo jiray waxaan la kulmay dad ii fidiyay cunno iyo cabitaan, waana fiicanahay, xoogaa uun baa daalay.”
Dadka wax ku qora barraha bulshada ayaa dhaliilay ganaaxa lacageed ee lagu riday ninkaasi, iyagoona taasi u sababeeyay inuu yahay halyeey go’aan wanaagsan qaatay.
Previous articleGalmudug oo ka hadashay Saraakiishii lagu laayay Gobolka Galgaduud
Next articleMaxaa ka soo kordhay Saraakiishii Militariga ee lagu laayay Gobolka Galgaduud?